सुत्ने पनि समय र तरिका छ ? यो कुरा कतिलाई थाहा होला ? | HimalDarpan
हिन्दू धर्ममा जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राम्रोसँग बताइएको छ । यसले मानिसका हरेक विधि-व्यवहार, कर्म, संस्कार, रीतिरिवाज, दिनचर्या, समाज, सम्बन्ध, देश, काल। स्थान आदिलाई नियम, अनुशासन एवं धमद्वारा बाँधिएको छ । यसो पनि भन्न सकिन्छ- नियम नै धर्म हो । पर्याप्त सुत्नु किन आवश्यक छ र सुत्ने बेलामा कस्ता नियमको पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत हिन्दू धर्ममा विस्तारपूर्वक बताइएको छ । के कस्ता छन् त ती नियम ? हेरौँ ।
जुन ओछ्यानमा २४ घन्टामा ७ देखि ८ घन्टा बिताइन्छ त्यो राम्रो हुनु आवश्यक छ । ओछ्यान बढी नरम तथा कडा भयो भने शरीरलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ । जुन ओछ्यानमा ७, ८ घन्टा बिताइन्छ त्यो आप\_mनो मनले खोजेजस्तै भयो भने शरीरका सबै सन्ताप मेटिन्छन् । दिनभरिको थकाइ मेटिन्छ । विहान उठ्दा तरोताजा एवं फुर्तिलो भएको महसुस हुन्छ । यसकारण ओछ्यान सुन्दर, नरम, आरामदायी हुनुका साथे बलियो पनि हुनुपर्छ । तन्ना र तकियाको रंग पनि आँखालाई शीतलता प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दा पनि यो ठीकै देखिन्छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा चुम्बकीय प्रवाह हुन्छ । उत्तरी ध्रुवमा धनात्मक (+) तथा दक्षिणी ध्रुवमा ऋणात्मक(-) प्रवाह हुन्छ । त्यसैगरी मानिसको शिरमा धनात्मक तथा गोडामा ऋणात्मक प्रवाह हुन्छ । विज्ञानका अनुसार समान ध्रुवबीच विकर्षण हुन्छ अर्थात् यिनीहरू एकअर्काबाट उछिट्टनि खोज्छन् । तसर्थ दक्षिणतर्फ गोडा पारेर सुतियो भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
कतिबेला सुत्ने कतिबेला उठ्ने ?
रातको पहिलो प्रहरमा सुत्नुपर्छ भने ब्रह्ममुहूर्तमा उठेर सन्ध्यावन्दन आदि गर्नुपर्छ । आधुनिक जीवनशैलीका कारण यस्तो गर्न सम्भव छैन भने के गर्ने त ? सकेसम्म चाँडै सुत्ने र चाँडै उठ्न प्रयास गर्ने । अधिकांश व्यक्ति रातको दोस्रो प्रहर अर्थात् निशिथमा सुत्ने गर्छन् । यो प्रहर ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म हुन्छ । रातको अन्तिम प्रहर अर्थात् उषा काल (राति ३ बजेदेखि बिहान ६ बजे) मा उठ्नुपर्छ । यो प्रहर शुद्ध सात्कि हुन्छ । यतिबेला उठेर नित्यकर्म सकी पूजाअर्चना वा ध्यान गर्नुपर्छ । अधिकांश व्यक्ति बिहानको ६ देखि नौ बजेका बीचमा उठ्छन् जब कि यो समयमा सबै कार्य सिध्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । दिनको दोस्रो प्रहर अर्थात् ९ देखि १२ बजेका बीच मानव मस्तिष्क सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छ, यतिबेला कार्य क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । काम गर्ने समयमा सुतिुहियो भने भविष्य अन्धकार बन्नसक्छ ।
सुत्ने कसरी ?
-सुत्नुअघि प्रतिदिन कपूर बालेर सुतियो भने राम्रो निद्रा पर्नुका साथै तनाव हट्छ । शुद्ध कपूरको अरू पनि थुप्रै लाभ छन् ।
-जुठो मुख तथा गोडा नधोई सुत्नु हुँदैन ।
-घोप्टो फर्केर, अर्काको ओछ्यानमा, भाँचिएको पलङमा तथा फोहोर घरमा सुत्नु हुँदैन ।
-कुपि्रएर सुत्दा मेरुदण्ढको हढ्डी कमजोर हुन्छ भने घोप्टो सुत्दा आँखामा समस्या देखा पर्छ ।
-रातको खानासुत्नुभन्दा दुई घन्टाअघि नै खाइसकुपर्छ । रातको खाना हलुका तथा सात्विक हुनुपर्छ ।
-राम्रो निद्राका लागि खानापछि केही बेर वज्रासनमा बस्नुपर्छ । यसपछि भ्रामरी प्राणायाम गरेर अन्तमा शवासनमा सुत्नुपर्छ । (एजेन्सी)